ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते - बडिमालिका खबर
इटहरी — सुनसरीको इटहरीमा मंगलबार राती भएको दुर्घटनामा एक जनाको ज्यान गएको छ । अन्य ६ जना घाइते भएका छन् । एउटा ट्रकले कार र सिटी सफारीलाई ठक्कर दिँदा सफारीमा सवार इटहरी ५ का २३ वर्षिय इश्वर राउतको ज्यान गएको हो । टाउकोमा चोट लागेका उनको उपचारको क्रममा विराट नर्सिङ होममा राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार गएराति पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको ना ४ ख २९२४ नम्बरको ट्रकले इटहरी ५ स्थित महेन्द्र राजमार्गमा प्र १–०२–२२३ ह १४३६ नं. को सिटी सफारीलाई ठक्कर दिएको थियो । भाग्ने क्रममा तीव्र गतीमा रहेका कारण इटहरी १६ बालग्राममा प्र ३–०१–०२४ च ९७२२ नं. को कारलाईसमेत ट्रकले ठक्कर दिएको थियो ।
कारमा सवार रामधुनी ३ का ३० वर्षिय दीलिपकुमार चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइते भएका कार चालक स्थानीय ३० वर्षिय सन्दीप राउत, ३५ वर्षिय नगेन्द्र गुरुङ, रामधुनी ५ का २४ वर्षिय सौगात अधिकारी, ३५ वर्षिय सुमन मगर, सिटी सफारी चालक झापा दमक ७ बस्ने वर्ष ३४ को हेमन्त बिकको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाजुरा जीप दुर्घटना हुँदा ३ जना घाइते, एककाे अबस्था गम्भिर
भरुवा बन्दुक पड्किएर बालकको मृत्यु
तास खेलिरहेको अवस्थामा १७ जना पक्राउ
हुम्लाको लिमीमा खाद्यान्न संकट, स्थानीयको पहलमा ल्याइएको खानेकुरा हिमपातले बाटोमै रोकियो
बाजुरा नेकपा एमाले त्रिबेणी नगरपालिका वडा न ५ को अधिबेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा दिल्ली बुढा
हिंजो आजको समाजमा न जान्ने कोहि भेटिदैन
शुदुरपश्चिमका पहाडि ३ जिल्लामा बिधुत सञ्चालन हुन समय लाग्ने
धनगढी र सुदूर पहाडमा नेपाल वायुसेवा निगमले उडान भर्ने !
सुदूरपश्चिम सरकारले भोलिदेखि बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत बाँड्ने